यो देश धोतीहरुसंग होईन, टोपीवाले कथित पहाडियाहरुबाट खतरा छ..! - Mangsebung News
होमपेज / मुख्य समाचार / यो देश धोतीहरुसंग होईन, टोपीवाले कथित पहाडियाहरुबाट खतरा छ..!
यो देश धोतीहरुसंग होईन, टोपीवाले कथित पहाडियाहरुबाट खतरा छ..!
शनिबार, जेठ २४, २०७७	विक्रम फागो वनेम
Made in India company प्रयोग गर्ने । अनि फेरि उसको भाषा हिन्दी प्रतिचेन् नफरत/घृणा गर्ने..? हिन्दु नामको धर्म ग्रहण गर्ने । तर हिन्दु नामधारी प्रतिचेन् आस्था औं प्रेम गर्ने । मात्र भाषा र रंगसंग नफरत गर्ने..? होईन तेमेरुँको यो कस्तोखाले राष्ट्रवादी प्रेम हो यो..? हिन्दी भाषा बोल्दैमा राष्ट्रघाती देशद्रोही हुने..? सांसद सभामा हिन्दी भाषा बोलेर दादागिरी देखायो रे । आन्तः बोलेर के भो त..? यी हिन्दी बोल्नेहरुले कम्तिमा देश त बेचेको छैनन् । के यो देश हिन्दी भाषा बोल्ने यी काले मधेसीहरुले बेचेका हुन् .? कि आदिवासी जनजातीले बेचेका छन्..? बेचेको त कुरै छोडौं, तेमेरुँका यी कांग्रेस, कम्युनिष्टे नेताहरुले देश टेण्डरमा लिलाम गर्दा सन्धी सम्झौंताहरुमा दस्तखत गर्ने त के फड्के साक्षीसम्म बसेका छैनन् बुझ्यौ..?
अनि हिजै देखि यो देश छिमेकी भारतलाई बेच्नेहरु यिनै मातृकाप्रसाद कोईराला, विपी.कोईराला, गिरिजाप्रसाद कोईराला, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, केपी.शर्मा ओली, प्रचण्ड दाहाल र बाबुराराम भट्टराई होईनन् र..? के यिनिहरु काले मधेसी जाति हुन् कि, कथित उपल्लो जाति भनिने बाहुनवादीहरु हुन् नि..?अनि यो देश हिन्दी बोल्ने मधेसीहरुले बेच्दै खादैछन् कि..?देश चलाउँने पहाडिया अति राष्ट्रवादी ट्याग लागेका यी बाहुने नेताहरुले..? यो देश हिन्दी बोल्नेहरुबाट खतरनाक छ की यहीँ छदम भेषमा कथित नेपाली ठेट् भाषा बोली टोपल्नेहरुबाट छ..? देश कस्ले चलाई रहेछ..? बारम्बार देश लिलाम गर्दै विवादास्पद कस्ले गरिरहेछ..? धोतीहरुले की यिनै बाहुनवादी टोपीवालेहरुले..?
खैर.. तेमेरुँको कुनचेन् शासके नेताहरुले हिन्दी भाषामा थुतुनो जोत्दैनन् हँ..? आफ्नै देशमा सार्क सम्मेलनहरु हुंदा यी तेमेरुँको नेताहरुले नेपाली भाषामा सम्बोधन गरेको कुनै प्रमाण छ..? आफ्नो देशमा आफ्नै भाषा बोल्न साहस नहुने आफनै डरपोके नेताहरुले राष्ट्रियताको धोती लगाएको देख्नु छैन । त्यो अमेरिकी कुहिरेहरुको भाषा बोल्नु भन्दा त बरु त्यहीँ छिमेकीको भाषा बोली दिनु निको होईन र..? हामेरुँको लिम्बुवानको सघन लिम्बुबस्तीहरुमा गैर जातीहरुले लिम्बुभाषा गज्जवले पड्काउँछन् त हौउ । जस्तो की त्यहाँका बाहुन, क्षेत्रीहरु लगायत अन्य बसोबास गरेका जातीहरुले दोहोरो वहीँ भाषा प्रयोग गर्छन् । अनि छिमेकी भएपछी त्यो रहनसहनले सबैमा दुरगामी प्रभाव त पर्छ नै । तर भाषा लवज बोल्दैमा किन आपती मान्नुपर्ने..? जसको भाषा र परिधान भनेको उसको पहिचान र सभ्यता पनि हो । एउटै जातिको भाषा र उसको परिधानले राष्ट्रिय एकता र अपनत्वबोध गर्न सक्दैन । उसै गाली र आरोप लगाउँन जानेको छ ।
एकताका नेकपा.एमालेका पान्थर थुम, क्षेत्र न.२, बाट निर्वाचीत सभासद माननीय डम्बरसिं सम्बाहाङफे राज्यमन्त्री भएका थिए यो कलमी हस्ताक्षर उसताका यी शासकेहरुको राजधानी मै मुन्टिएको थियो । ऊनी राज्यमन्त्री भएकोमा उनलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिने कार्यक्रम राखिएको थियो । जुन सर्वोच्च अदालतको परिसरभित्रको एउटा कार्यालय भवनमा हुँदै थियो । निम्तो पाएँ । सहर्ष स्वीकार गरि ज्यान हाजीर गराएँ । मान्यजन लब्ध प्रतिष्ठित सप्पैले बधाई शुभकामना दिए । आयोजक समितीको शुभेच्छुक भएको हैसियतले यो ज्यानलाई नि सम्बोधन गर्न आग्रह गरियो । उसताक उनलाई भने, यो देशको सिमान्तकृत जाति, वर्ग र समुदायको हक हितमा लडेर देखाउँन तागत देखाउँनुस् । झन् आफ्नो जातिको निम्ति मौलिक हक अधिकार सहित लिम्बुवानको मुद्वामा उभिन सक्ने हैसियत देखाउँनुस् । नत्र उहीँ सुवासचन्द्र नेम्बाङ जस्तो अनुहार लिम्बुको आत्मा बाहुनवादको मात्र बोकी हिड्ने राजनीति गर्ने हो भने,हामेरुँको लागि राज्यमन्त्री भए पनि के, नभए पनि के..? प्रधानमन्त्री नै बने पनि के बाल भो र..? उहीँ कागलाई बेल पाके जस्तै न हो बस..! यति भनेर, अनपेक्षित एकचिम्टी बधाई र शुभकामना दिएँथें । बदलामा उनले जवाफदेहीता
फर्काएथे । साँसद भवनमा आफ्नो लिम्बु भाषाबाट पहिलो सम्बोधन गर्ने प्रतिनिधि ब्याक्ती त्यो मै हुँ भने । जुन त्यो यथार्थ पनि थियो । आखिर उनले आफ्नो साँसदीय पदभार ग्रहण कार्यकालको अवधीभर मात्र यहीँ एउटा रेकर्ड ब्रेक राख्ने काम गरे । तत पश्चात ऊनी गुमनाम जस्तै छन् ।
अतः भन्नुस् कि तेमेरुँको यी नेताहरुले यहीँ भारत भ्रमण जादा नेपाली बोलेको कुनै रेकर्ड छ तेमेरुँसंग..? आफ्नो देशमा बोल्न नसक्नेहरुले भारतमा बोल्न सक्छन.? अनि त्यो भन्दा पर अन्य मुकुकमा गएर झन् बोल्छन् त..? राष्ट्रवाद र देशभक्ती भएको नखरा देखाउँछौ । यो देशमा नरेन्द्र मोदी आउँदा कहिले नेपाली र अंग्रेजी भाषा बोलेको सुन्यौं..? मोदी यहाँ आउँदा,तेमेरुँको नेताहरुले नेपाली भाषामा संवादहरु गरेको सुन्यौं..? चिनियाँ प्रमुखहरु यहाँ आउँदा तिनले आफ्नो चिनियाँ भाषा बाहेक अरु बोलेको सुन्यौ..? अरु त के कुरा त्यहीँ नेपाली भारतीयदुतसंग पनि हिन्दीमै वात गर्छन् । तो देशको त्यस्तो राष्ट्रिय फर्मल कार्यक्रमहरुमा तेमेरुँका यी नेताहरुले हिन्दी मै आफ्नो देशको पहिचान र सभ्यता भएको पाठ सिकाई दिन्छन् भने जावो खसीको टाउको देखाएर, कुकुरको मासुहरु बेच्ने साँसद थलोमा हिन्दी भाषा पड्काउँदा किन तेमेरुँलाई आपत्ती..? यी हिन्दी बोल्नेहरुलाई गाली र लाञ्छना लगाउँने टिके साँसदहरुले यी हिन्दी बोल्नेहरुलाई झैँ तेमेरुँको जो हिन्दी बोल्ने नेताहरुलाई यसरी नै गाली गलौज गरेर थर्काउँन सक्छौ..? के त्यो दम वा साहस छ..? हिन्दी बोल्नेहरु सबै तेमेरुँ राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरु हौउ भन्न सक्छौ..? आईन्दा बोल्यौ भने तेमेरुँको जीव्रो थुत्छौं भन्ने हिम्मत छ..? वात गर्छौ कति न राष्ट्रवादी भए जस्तो..? स्याँठाहरु..!
अपितुः फेरि अर्को आरोप छ, मधेसीहरुले अंगीकृत नागरिकताहरु लिएका हुन् रे । के तेमेरुँका यी नेताहरु (अपवाद बाहेक)चेन् यहीँ देशको माटोमा जन्मिएका हुन..? धेरै त वहीँ भारतीय माटोमै जन्मिएका छन् । राजनीति गर्न र देश बेच्न पनि त्यतैबाट सिकेर आएका हुन् । यदी मधेसीहरु अंगकृत नागरिक नै हुन् भने त्यो अंगकृत नागरिकताको प्रमाणपत्रहरु दिलाउँने शासकहरु को हुन..? के यो भोट संख्या बढाउँनलाई उनै तेमेरुँको नेताहरुले गरेका होईनन् र..? यी अंगकृत नागरिक त यी तेमेरुँका नेताहरु पनि त्यो लिष्टमा काफी छन् त । तर दुर्भाग्य तेमेरुँका यी नेताहरुले जस्तो येनारुँले देश बेच्न सिकेनन्, जानेन् के । बरु सिमा क्षेत्रको सदा रक्षा गरिरहे । बरु केही मधेसी नेताहरुले देशै बेच्ने लाईनमा नउभिए पनि केही गद्वार कामहरु गरे होलान् । जसको प्रतिवाद र खण्डनहरु गर्नैपर्छ । तर हिन्दी भाषा बोल्दैमा र धोती लगाउँदैमा कोही राष्टघाती र देशद्रोही बन्न सक्दैनन् र हुन सक्दैनन् । के यो देशको सिमा क्षेत्रको रक्षा यो तेमेरुँको टोपीवाले शासकहरुले गरेका हुन् र..? छन् कोही त्यस्तो राष्ट्रवादीताको भावाना बोकेका नेताहरु..? वि.स.२००७ यता कोही कसैले गरेको एउटा मात्र सवुद प्रमाण पेश गरेर देखाई दिन सक्छौ..? बरु खाँटी राष्ट्रवादी नेताहरुमा भने पुर्वपञ्चायती शासक प्रम.स्व.मरिचमानसिंह श्रेष्ठ बाहेक कोही देखिएनन् ।
पुनश्चः बहस गर्छौ, धोती र टोपीको । टोपी लगाउँनेहरुले धोती लगाउँदैनन् र..? धोती नलगाई येनारुँको पुर्खाहरु यहाँसम्म आएका हुन् र..? आफ्नो बाउ आमाहरु परलोक हुँदा अन्ततः वहीँ लगौंटीमा केश मुण्डन गरि, त्यहीँ धोतीमै १३ दिन कोरामा बसेको देख्छु त । केवल रंग मात्र बदलेको देखिन्न । मधेसीहरु काला छन् । तेमेरुँ गहुँगोरो छौ, बस् त्यति न हो फरक । परन्तु यी कालाहरुको(अपवाद बाहेक) मन सफा छ । तर सेतो हुनेहरुको मन (अपवाद बाहेक) असाध्यै कालो छ । देश त्यसै बेचीरा छन् त । अब, अहिले त्यो अमेरिकी MCC (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन) सम्झौंता खुलेआम साँसदीय अनुमोदन द्वारा देश बनाउँन ठेक्कामा दिदैंछन् । यसलाई उनेरुँ राष्ट्रवादी कदमको प्रक्रिया हो भन्छन् । यो ज्यान भने त्यसलाई राष्टघाती हो भन्छु । अब यतिको प्रतिवाद र मुर्दावादको मुठ्ठी कसेसी राष्ट्रघाती देशद्रोही ट्यागको भिल्ला त लगाउँनु त छदैं नै छ ।
तसर्थ, रंग र भाषामा नफरत नगरे हुन्छ । सांसद सभामा नेकपा.कि गंगा चौधरीले हिन्दी भाषा बोलेकी सरिता गिरीप्रति रोष प्रकट गर्दै थिईन् । भनिन् कि सांसदमा पनि भारतीय चेलीहरुको दादागिरी चल्न थाल्यो । जसको तत्कालै प्रतिवाद गरिन् जसपा.कि सरिता गिरी र अमृतादेवी अग्रहरीले पनि । यी दुई नेतृले । संविधानको भावाना र राष्ट्रियता बुझ्न सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै सुझाईन् । कमैंया दासबाट मुक्त हुन नसकेका पश्चिमका आदिवासी चौधरीहरु, देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछी यी गंगा चौधरी अनि शान्ता चौधरीहरु बबुरा नारीहरुले सांसद छिर्ने अवसर प्राप्त गरे । तर यी विचरीहरुलाई के थाहा छैन भने यो शासकीय ब्यवस्था यहीँ हिन्दी बोल्नेहरुको(अपवाद बाहेक) नेतृत्वकर्ताहरुले लडेर ल्याएको हो भन्ने । जो समानुपातिक कोटा मार्फत पिछडिएको आफ्नो जातिबाट देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर जुर्यो । जो अहिले स–गौरव अति राष्ट्रवादी भए झैं सांसदको रोष्टममा त्यतिको हाँक दिने भए, बने । लाग्दो हो, त्यो आफ्नो पार्टी कम्युनिष्ट, काँग्रेसका कारण सम्भव भएको हो । यी दुई थारुनी नेतृले के विर्सनु हुन्नथ्यो भने, यिनै काला मधेसीहरुको संघर्षको कारण आज समानुपातिक प्रक्रियाबाट साँसद प्रतिनिधि बन्न पुगेका छौं भन्नेचेन् हेक्का राख्नैपर्छ ।
विधान त त्यो अकाट्य प्रक्रिया भएको कारण न आज कमैंया दासी बनेका थारुनी महिलाहरुलाई नेकपाले प्रतिनिधि पात्र बनायो । नत्र यो प्रणाली नहुन्थ्यो त यी दुई नेतृहरु,हिजो जहाँ थिए, अहिले पनि त्यहीँ जगा नै हुने थिए । तसर्थ, म कसरी यहाँनेर आई उभिन सकें..? भन्ने पहिले त्यो धरातल खोज्ने । अनि मात्र गहन बुझेर र त्यसको विरुद्ध प्रतिवाद गरेको राम्रो हुनेछ । कुरै नबुझी हावाको तालमा अन्धो उग्र राष्ट्रवादी हुँदा उहीँ आफ्नै पार्टीका नेताहरुको कमैंयादास भन्दा पर पुग्न सकिन्न के । कि यो देशमा गंगा चौधरी र शान्ता चौधरीको हाई प्रोफाईल, कुन प्रणाली र कुन आधारले निर्माण गर्यो । अनि कस्ले बनाई दियो के..? त्यो बुझ्न बहुत जरुर छ । त्यहीँ हिन्दी बोल्ने नफरतवालाहरुको कारण आज यी दुई थारुनीहरु देशले चिन्ने मौका पाएको छ । त उनेरुँ पनि देश र जनतासंग साक्षत्कार गर्ने अग्रधिकार सहितको राजनीति नेतृ हुने भाग्यता प्राप्त गरेका छन् । त्यसैले फेरि भन्छु कि पहिले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरौं । आफुले आफैलाई हेरेर कहिल्यै चिन्न सकिन्दैंन । आफुलाई चिन्न अरुको आँखा प्रयोग गर्नुपर्छ । रंग र भाषा आफ्नो पहिचान औं सभ्यता हो । हिन्दी भाषालाई नफरत गर्नेहरुले यो देशको भाषा UNO मा केमा दर्ज भएको छ..? पहिले राम्ररी बुझेर अध्यायन गरेर अनि हेक्का राखेर थुतुनो चलाउँने गरौं । रंग र भाषाका आधारमा नफरत गर्ने र प्रतिवाद गर्ने अधिकार कोही कसैलाई छुट छैन । एकपटक आफैले निर्माण गरेको संविधानको मस्यौदाहरु पढ्ने र पालक बन्ने अभ्यास गर्ने । सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री जे भए पनि देशको संविधान भन्दा माथी कोही छैनन् । कि तेमेरुँको केपी.ओली भनेको यो देश,राष्ट्र होईन । न की शेरबहादुर या प्रचण्ड हुन् ।ऊनी राष्ट्रियता होईनन् । ऊनी मात्र यो देशको प्रधानमन्त्री हुन् । देशको राष्ट्रियता र जनताको रक्षार्थ कार्यकारी प्रमुख बनाईएको हो । देशको अस्मिता लुट्न र भक्षक बन्नलाई होईन ।
अस्तुः बस् ..! यति लिखत गरें । यो कलमी हस्ताक्षर ज्यान नि, एउटा पहाडिया मधेसी हो के । जे सत्य देख्छु नि हो त्यो भन्छु ।
जे देख्छु, त्यो लेख्छु । अझै भन्छु र लेख्छु कि, यो देश अझैपनि हिन्दी बोल्ने धोतीहरुसंग होईन, यिनै टोपी लगाउँने पहाडिया बाहुनबादीहरुसंग खतरा छ । देशको सिमानाहरुको खोलानालाहरु टेण्डरमा लिलाम गर्दै बेच्नेहरुले के भोलि यो सिङगो मुलुक नै लिलाम नगर्लान् , नबेची देलान् भन्ने के ग्यारेण्टी छ..? ए..! कम्युनिष्ट, काँग्रेसीजन हो, लौ भन्नुस् त..? के यी नेताहरुले देश भारतलाई नबुझाउला भन्ने कुनै ग्यारेण्टी लिन सक्नु होला र..? जसरी लेण्डुप दोर्जेले आफ्नो देश सिक्किम भारतलाई (सन.(१९७५) बुझाएको थियो । स्मरण गराउँ कि, यो अमेरिकी MCC योजना उहिले(सन.२०१३)सेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वकालमा नै सम्झौंता पास गरिसकेका छन् । सांसदीय अनुमोदन गर्ने त वहीँ जनताको आँखामा मिथ्या भ्रमहरु छर्नु मात्र हो । यसो जनताको प्रतिक्रिया बुझ्नलाई मात्र हो । जुन राष्ट्रघाती कदम हो भन्ने जनताले बुझे । र तिव्रत्तर आलोचना र प्रतिवाद गर्ने खण्डन अनि सडक आन्दोलनहरु पनि तातिन्दो छन् ।
तर त्यो MCC अब, साँसद सभाले अनुमोदन नगरे पनि के । गरे पनि के । जुन अनुमोदन पास भए जस्तै न हो । अब, पुरापुर लेनदेनमा अमेरिकी काम कार्बाहीहरु भए, गरेकाहरु र गर्न सुचारु गर्न लागेका तमसाहरु हेर्नलाई मात्रै न बाँकी छ । जुन गर्नुपर्ने विधि, विधानहरु सकि त सके । जो नेताहरूले लेनदेन पनि गरिसके । अनि यस्ता कथित राष्ट्रवादी नेताहरुले भोलि खुलेआम देशै बेच्न सक्दैनन् र..? जनादेश दिने कम्युनिष्टजन हो, तेमेरुँको नेताहरु कति देशभक्त राष्ट्रवादीहरु हुन् भन्ने बुझ्दै नै छौं होला सायद । आखिर देशै बेचीखाने मामलामा त प्रतिद्वन्दी र प्रतिपक्षी भन्ने पनि नहुने रहेछ । देश लिलाम गर्नमा अहिले प्रतिपक्षी भनाउँदो काँग्रेसीजनलाई नै सबैभन्दा हतारो देखिएको छ । यो विपक्ष ब्रेञ्च नभएको साँसदीय मुलुक हो भन्दा फरक हुने छैन । आखिर यथार्थ सत्य कुराहरु ओकल्दा र मार्चपास गर्दा, अराजक राष्ट्रघाती र देशद्रोही भन्छौ त, त्यो ट्याग लगाई देऔ । आजीवन त्यो विल्ला भिरौंला । केही वात छैन के । राजनीति सत्ताको यो खेलमा अवस्य पनि एकदिन पेनाल्टी शुट आउट हुने नै छ । त्यो जिरो सम गेम पनि हुन सक्छ । अर्थात म छैन भने तँ पनि छैनस् के । बस…!